Weerar kadhacay Shabeelada Dhexe – Radio Daljir
Maarso 30, 2018 9:09 b 0
Ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday kolonyo gaadiidka ah oo ay wateen ciidamada Burundui ee ka tirsan Howlgalka AMISOM deegaan katirsan degmada Mahadaay ee gobolka Shabeelada Dhexe oo lagu magacaabo Cali-fooldheere .
Warar laga helayo dadka deegaanka ayaa sheegaya ciidamada AMISOM ee Burundi inay ka yimaadeen degmada Mahadaay oo ay howlgallo ay wadeen.
Lama oga iyo ilaa hadda khasaaraha ka dhashay weerarka oo labada dhinac uu jiro khasaare soo kala gaaray.
AMISOM ayaa ku sugan gobolada Koonfureed iyo Bartamaha Soomaaliya oo ay ku taageeraan ciidamada dowladda faderaalka Soomaaliya dagaalka ay kula jirto ururka Al-shabaab.
Cabdiwali Muudeey” Waxba Iskama Badalin Mowshinka Beri ee Jawaari”